देउवा समूहबाट पदाधिकारी उम्मेदवारको आज टुंगो लाग्दै, को-को छन् आकांक्षी ? - ramechhapkhabar.com
देउवा समूहबाट पदाधिकारी उम्मेदवारको आज टुंगो लाग्दै, को-को छन् आकांक्षी ?
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनका लागि उम्मेदवार तय गर्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार आफू पक्षीय नेताहरुको बैठक बोलाएका छन्। आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सभापति देउवाले आफू निकट नेताहरुको बैठक बोलाएका हुन्। बैठक बुधबार बिहान ९ः०० बजे बस्दैछ।
देउवा समूहमा अहिलेसम्म सभापतिबाहेक अन्य उम्मेदवारको टुंगो लागेको छैन। सभापतिमा देउवाबाहेक अरुको दाबी नभए पनि दुई महामन्त्रीका लागि चार जना आकांक्षी देखिएका छन्।
देउवा समूहबाट बालकृष्ण खाँण, प्रकाश शरण महत, विश्वप्रकाश शर्मा र एनपी साउदले महामन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन सुरु हुँदैछ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले गरे कांग्रेस सह-महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपाली कांग्रेसेको सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। उनले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। ‘केन्द्रीय नेतृत्व तहमा रहेका साथीहरूसँग छलफल गरेर उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालसमयसँग भने, ‘म पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेद्वार दिने पक्का हो।’
उम्मेदवारी घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री शाही आज काठमाडौं प्रस्थाना गर्दैछन्। ‘उम्मेदवार बनेर मात्रै भएन, जित्नका लागि साथीहरुसँग भोट पनि माग्नु पर्‍यो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘आवश्यक तयारी गर्न आज नै काठमाडौँ जाँदैछु।’
२२ वर्षको उमेरमा कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका उनी हुम्लाको पहिलो सभापति समेत हुन्। हुम्लामा २६ वर्ष लगातार सभापति बनेका उनी ११ औं, १२ औं र १३ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। लगातार तीन कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बनेका शाहीले पहिलो पटक पदाधिकारीमा भिड्न लागेका हुन्। उनी संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) समूहका हुन्।
मंसिर २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुँदै छ। मंसिर २५ मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ।